Ahu Verizon | Martech Zone
Wednesday, December 13, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enweghị m ọmịiko ọ bụla maka Verizon.
Na mbido afọ a, amalitere m akaụntụ na Verizon na ụlọ ọrụ m kwụghachiri m ụgwọ maka ịzụta ekwentị 6700 PDA. Akụkụ nke ihe mere m ji zụta ekwentị a bụ iji jikọọ laptọọpụ na ekwentị m site na USB maka ịntanetị mgbe m nọ n'okporo ụzọ. Ajụrụ m ma ekwentị ọ nwere ike ime nke ahụ, ha sịrị ee. Agbanyeghị, ha hapụrụ eziokwu ahụ na ọ chọrọ mgbakwunye ego kwa ọnwa karịa na ịntanetị na-enweghị njedebe.
Ugbu a, anọgidere m na nkwekọrịta ahụ na m ka nwere akaụntụ ọzọ site na ụgbọelu ọzọ maka ịnweta Internetntanetị.
Per Verizon.com: Ebumnuche anyị bụ ịbụ ndị a na-akwanyere ùgwù na nkwukọrịta site na ịme na idobe nkwa nye ndị ahịa anyị, ndị obodo anyị, ndị na - ekenye anyị, na ndị ọrụ anyị. Ntinye Verizon na Valkpụrụ, nke na-egosi n'ime mkpuchi Usoro Omume anyị, na-eme ka nkwa ndị a pụta ìhè.
Ummm… ọ bụ ihe mgbaru ọsọ dị mma inwe, mana ekwenyeghị m na ọ bụ n'ezie gị ihe mgbaru ọsọ. Nke a bụ ihe atụ ọzọ dị mwute nke nsogbu Verizon:
Ọ bụ ihe na-egbu mgbu n'ezie ige ntị na oku ekwentị a niile. Ikekwe ọ bụrụ na Verizon ga-akwụsị ịnwa nickel na dime (ma ọ bụ 0.002 cents) anyị, anyị agaghị enwe afọ ojuju ndị ahịa a.
Gini mere na iwepu Usoro Omume na ibe ulo gi, Verizon? Ọ bụ naanị ohere furu efu!
Tags: verizonojiji nke verizon kilobyteverizon ná mgbakọ na mwepụ
Del.icio.us Ntinye maka Firefox
Dec 13, 2006 na 11:03 PM
Echere m na m chọrọ ịkwa ákwá maka ha abụọ! Ma ọ bụghị maka Verizon. 🙂
Dec 13, 2006 na 10:40 PM
Chei, M gere ntị na mkparịta ụka ahụ niile .002 cents na ọ bụ ihe na-egbu mgbu. Achọrọ m ịkwa ákwá maka nwa okorobịa ahụ.
Dec 16, 2006 na 6:54 PM
Ọ ga-abụrịrị na ọ dị elu ikwere na verizon ga-akwụ ụgwọ .002 cents (nke ahụ karịrị 1000 ugboro ihe na-erughị 1 cent !!) kwa kilobyte eji. O doro anya na ọ bụ typo ma ọ bụ ihe.lol. Enweghị m ike ikwenye na ọ na-anwa ịnwa otuto site na iji atụmatụ .002 cents. N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ iberibe ahụ anaghị emegide ya n'ihi arụmụka m. Ha kpokọtara .002 dollar na .002 cents na otu nkata.lol.